Banyere Anyị - Yantai Dongyuan Plastic Products Co., Ltd.
Yantai Dongyuan Plastic Products Co., Ltd e hiwere na 1999, ọ bụ ụlọ ọrụ na azụmahịa mwekota Enterprise, kwadoro site mba metụtara ngalaba.Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ekpuchi mpaghara 10000 square mita na ihe karịrị afọ 20 nke ahụmahụ na mmepụta ụdọ.
anyị ụlọ ọrụ nwere ike na-enye 3/4 strands PP danline eriri, Monofilament eriri, Multifilament eriri, polyester / nylon, braided eriri, pp baler twine.na-enyekwa ụgbụ polyethylene (PE), akpa ụgbụ PP, kemịkalụ fatịlaịza hoisting net, ụgbụ nchekwa ibu, ụgbụ ụgbọ ala, ụgbụ nchekwa na nkọwapụta pụrụ iche nke ụgbụ ejiri aka , A na-eji ụdọ ahụ eme ihe na ịkụ azụ, aquaculture, ugbo, mbukota , ugbo na egwuregwu.A na-ejikarị ụgbụ a na-echekwa ụlọ ọrụ na-emepụta fatịlaịza, ụlọ ọrụ na-edozi ọka na mmanụ.
ngwaahịa anyị nwere ike izute ụkpụrụ ụlọ ọrụ ụlọ na ụkpụrụ ISO mba ụwa, enwere ike ịkwado ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ dị ka SGS, CE, GS ... A na-ebuga ngwaahịa anyị na ndịda ọwụwa anyanwụ Asia mba dị ka Singapore, Malaysia, na Philippines, yana kwa. mbupụ na Middle East, Europe, na America.Ji obi ụtọ nabata ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile ka ha gaa na ụlọ ọrụ anyị ma nwee olileanya ịkwado gị.
Ònye tụkwasịrị anyị obi?
PP eriri nwere ike na-enye elu àgwà na asọmpi price maka anyị ahịa, anyị ngwaahịa exported na Southeast Asia mba dị ka Singapore, Malaysia, na Philippines, na exported na Middle East, Europe, na America.And anyị ngwaahịa nwere ike izute ime ka. ndị ahịa chọrọ dị ka SGS, CE, GS
Gịnị mere obi ji tụkwasị anyị obi?
Akwụkwọ ndị a niile pụtara na anyị na-emeziwanye mgbe niile…
gịnị ka anyị ga-emere gị?
Anyị na-achịkwa usoro niile site na akụrụngwa na-abanye n'ụlọ mmepụta ihe na ngwaahịa nke ụlọ ọrụ mbụ.Ụlọ ọrụ anyị nwere usoro nkwenye zuru oke na usoro ire ere.